corona third wave Archives - Nagarik Today
होम » corona third wave
कोरोनाको तेस्रो लहर सेप्टम्बर देखि अक्टोबर सम्ममा आउने दावि, दोस्रो लहरको भन्दा बढी गति हुने !
भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर सेप्टम्बर देखि अक्टोबरको वरिपरि हुने दाबी गरिएको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले आ-क्रान्त भएको भा-रतमा फेरी तेस्रो लहरको पुर्वानुमान गर्दै सेप्टम्बर देखि अक्टोबरको वरिपरि हुने आईआइटी कानपुरले दाबी गरेको हो । आइआइटी कानपुरका प्रोफेसर राजेश रन्जन र उनको टिमले गरेको अध्यययनबाट यस्तो पुर्वानुमान गरेको गरिएको हो । को- रोनाको तेस्रो लहरको अनुमान लगाउदै प्रो. रन्जनले जनताहरु यस विषयमा चिन्तित भएको बताएका छन् ।
उनले एसआईआर मोडलेको प्रयोगबाट दोस्रो लहरको महामारीलाई पारामिटरको आधारमा संम्भावित तेस्रो लहरको तीन परिदुष्य तयार गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनको अनुसार भा-रतमा १५ जुलाईबाट पुर्ण रुपमा लकडाउन हटेको छ ।
१) भाइरस उत्परिवर्तनको साथ सामान्य हुनेछ । यसको गति दोस्रो लहरको भन्दा बढी हुनेछ र यो सेप्टेम्बरमा हुनसक्छ ।
२) तेस्रो लहर अक्टोबरमा चरम विन्दुमा हुनेछ र दोस्रो लहर भन्दा कम हुनेछ ।
३) कडा शारीरिक दुरीको पालन गरेर तेस्रो लहर अक्टोबरसम्म टर्न सक्छ । यसको गति दोस्रो लहर भन्दा कम हुनेछ ।
काेराेना भाईरस (काेभिड १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।